Umzi-mveliso weNkxaso ye-Elbow-Abavelisi beenkxaso e-El El China, abaThengisi
Isongezo sengalo ye-UV
Lo mkhono wengalo awukwazi ukukhusela iingalo zakho kuphela, kodwa ukuzisa nokupholile. Uvavanyo lochwephesha, lunokhuseleko olukhuselekileyo lwe-UV. Unokuzilolonga elangeni elomeleleyo ngaphandle kokukhathazeka ngolusu lwakho. Inkqubo eprintiweyo kunye egudileyo yokwenza lo mkhono yenza ukuba le greythi ibe mandla kunye namandla aphezulu, i-mo drooped ngaphandle kogonyo. Ngomtya ongatyibilikiyo ngaphakathi, umkhono awuzukuhamba ngokuzivocavoca.
I-pad ene-hexagonal ezimeleyo, ithoba kwaye isasaza impembelelo yamandla angaphandle ngexesha lokuzilolonga. Yipadesi yamva nje enobuchule obuqinileyo bencindi yokulwa nobusi kukhuseleko olungakumbi kwimidlalo. Ilaphu elihlukileyo le-microfiber, ukomisa ngokukhawuleza ukuze ulusu lwakho lome kwaye lukhululekile. Umtya ojikelezayo we-Wavy unokuthintela ngokufanelekileyo iingalo ukuba zingahambi phantsi ngexesha lokuhamba.
Ukusebenza okuphezulu kwendwangu yokuphefumla ifunxa ukujuluka kwaye igcina ingalo yakho yomile kwaye ingenasimahla, uxinzelelo oluphumeleleyo luphucula ukujikeleza kwe-Ultra ngokukhawuleza, ukuxhaswa okuphezulu kokunyangwa kwemisipha. Uyilo olukhethekileyo olutyunjiweyo luhambelana nokudibana. I-brace ye-elbow iqinile kwaye yomelele, ethintela umkhono ukuba ungawi phantsi kweengalo zakho. Ukhuseleko olupheleleyo luhambelana nentlungu ye-elbow.